JOURNEE DE L’IGM – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
JOURNEE DE L’IGM
Notanterahana ny Sabotsy faha 28 Novambra 2020 ny hetsika « Journée de l’IGM », varavarana misokatra mampahafantatra bebe kokoa ny Institut de Gemmologie de Madagascar izay rantsamangaikan’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika. Mampiavaka azy ny maha-toeram-panofanana ambony tokana, nahazo alalana avy amin’ny fikambanan’ny Gemmologue maneran-tany any Londres, hampianatra ho lasa gemmologue international eto Afrika sy eto amin’ny ranomasimbe Indianina . Manana laboratoara fitaratra ihany koa ny IGM, manao fitsirihana sy manamarina ireo vato mivoaka ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Mpiasa 11 ao amin’ny IGM kosa no notolorana mari-pankasitrahana ka ny 3 volafotsy ny 8 kosa alimo.
Nanambara ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA fa fanamby miandry ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny Institut de Gemmologie de Madagascar na ny IGM ny ahafahana mametraka ny label Made in Madagascar. Mba ahafahana mametraka ny vidiny lafo kokoa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena nefa dia mila ahodina sy tefena ireo vatosoa sy vato sarobidy malagasy ireo.
Horonantsary: Vaovao VIVA Evènement 28/11/2020
← ANJOZOROBE : ATRIKASA FAMPAHAFANTARANA SY FAKAN-KEVITRA TENY IFOTONY HO FANATSARANA NY LALANA MIFEHY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY